माओवादी जनयुद्धमा मारीएकी दिदीको यादमा | Janaandolan
Home समाचार समाचार माओवादी जनयुद्धमा मारीएकी दिदीको यादमा
रातो सलाम अनि सम्झना ल
बाहिर देउसी र भैलिनी गाउनेहरु आई रहदा तिमी र म पल्लो गाउँमा भैली अनि देउसी गाउन गएको संझनाले सतायो । दिदी आज तिमी र म सानोमा लडाई खेलेको खुव याद आएको छ । कता कता तिम्रो यादमा १७ साल देखी खाली रहेको निधार खाली नै राख्ने मनमनै अठोट पनि गरें दिदी
घुम्दै फिर्दै यसपाली पनि तिहार आयो । तिहार आएको सैकेत आगन डिलमा फुलेका मखमली र सयपत्रीले ससम्झाए अनि टि भी र एफ एमहरुमा बजेका भैली देउसी गीतहरुले दिई रहेका छन् । दिदी जब एकान्तमा हुन्छु नि बाल्यकाल सम्झन्छु । कति खुशीका दिन थिए अबोध र अबुझ बेलामा । एक अर्काको कुरा बाआमालाई लगाएर आँफू राम्रो बन्न खोज्थ्यौं नी हामी । जब दिदी भाइ झगडा गरी कुटाकुट गर्थ्यौं तब तिहारमा तँलाई टीका लगाइदिन्न भन्थ्यौ है । जब भाइ टीका आउँथ्यो सयपत्री र मखमलीको माला नजानी नजानी भए पनि आँफै उन्थ्यौ नी । कयौंपटक सियोको टुप्पोले तिम्रा औंलामा घोचेको थियोे म कति हाँस्थे हई तिम्रो दुखाईमा ।
टीकाको साइत भन्दा धेरै अगाडि बिहानै देखि सबै तयारी गरी बस्थ्यौ तिमीलाई सम्झना छैन होला । म त्यो हाम्रो वालपनलाई सम्झने गर्दछु नी हरेक तिहारमा । हामी संगै पढ्थ्यौं मैले नजानेका कुरा सिकाईदेउ भन्दा पढ्नलाई हल्ला गर्यो बा भन्दै बालाई भन्थेउ अनि बाले मलाई गाली गरेको पनि संधै याद आई रहन्छ दिदी । हाम्रो एसएलसि अगाडि नै म परिक्षा केन्द्रमा डेरा खोज्न गएर फर्कदा तिमी घरमा थिईनौ । तिमी हरायौ कहा गायौ कही पत्तो पाईएन तिम्रो खोजीमा म कति भौतारीए तर तिमीलाई भेटीन । तिमी हराएको पिडामा आमा थलिनु भयो । आमा एकै ओछ्यान हुँदा पनि तिमी घर आईनौ । तिमी संगको बिछोडमा आमा त थलीनु भयो साथिहरु रुदै रुदै परीक्ष दिन गए । आमा पनि त तिम्रो वियोगमा केही महिनामै संसर छाडेर जानु भयो मलाई टुहुरो बाएर । अनि बा ले पनि त अर्की आमा ल्याउनु भयो अनि म हरेक तिज र तिहारमा तिम्रै यादमा रोयर बसेको छु तिम्रो अभावमा । बाको मनमा एउटा धोको छ तिम्रो नाममा केही गर्ने उहाँको सपना सकर पार्न लागेको छु ।
तिमी हराएको केही दिन पछि पो थाहा भयो तिमी त देश अनि दुनिया वदल्नका लागि माओवादी जनयद्धमा लामबद्ध भईछौ । दिदी देश बदलियन दुनिया उस्तै छ हुने खानेहरु मोज मस्तिमा छन् अनि हुँदा खाने जस्ताको तस्तै । तिमी हामीले फेरी केहीलाई हुनेखाने बनाउन पो त्यो लडाई लडेका रहेछौं । तिमीले आफ्नो ज्यान दियौ लडाईकै कारण म पनि त शारीरीक अपाङ्ग भएको छु । दिदी, कति तिहार आए गए तिम्रो हातले मेरो निधार नसजाएको कति वर्ष भयो । बाल्यकालमा टीका बाङ्गो भयो भनेर झगडा गर्थें नि तिमीसङ्ग अनि तिमी आमा र भाउजुलाई भनेर टिका सोझो बनाउन लगाउँथेउ है । त्यही बाङ्गो टीका नलगाएको पनि १७ बर्ष बितेछ ।
अधेरी रातमा बाँसको कप्टेरा बालेर भैली देउसी खेल्न पल्लो गाउँमा गएको सम्झना ताजै छ मलाई । सबैका घरमा तिज र तिहार आउँछ दिदी हाम्रा घरमा तिज र तिहार नआएको धेरै बर्ष भइसक्यो । मलाई न त तिज छ, न त तिहार नै । भाइ टीकामा जब सबैका दिदीबहिनी आउँछन् नि अनि तिमीलाई सम्झन्छु आँखाबाट अश्रुबर्षा हुन्छ । छोराछोरी र बाआमाले नदेख्ने गरि रुन्छु । मलाई थाहा छ मेरी दिदी यो दुनियामा छैनौ तर पनि तिम्रो यादले मलाई सताई रहन्छ । तिमी माथि दुमश्नले घेराहाली मेरै सामु तिमीलाई …………………. ।
दिन रात नभनी दुनिया वदल्ने सपना बोकेर तिमी जनयुद्धा लाम बद्ध भए पछि म पनि त तिमी संगै जनयुद्धमा सामेल भएँ । तर के भयो र ? हाम्रो रगत र पसिनाले धेरै अगाडि बढे आफ्नो पारीवारीक स्वार्थ पुरा गरे आफ्ना आफन्त र नाता गोताहरुलाई सरकारी जागीरे बनाए । हिजो मर्दा हामी मर्ने आज अर्काले मस्ति उडाउने । दिदी युद्धको त्यो समय एउटा तिहार त संगै मनायौ नि है हामीले युद्धमोर्चामा ।
दिदी मलाई रेणु दिदी र गंगा दिदीलाई सोध्न मन छ माईति बिनाको तिज र तिहार कस्तो हुन्छ दिदी भनेर । उहाँहरुको पनि त अनुभव होला नि प्रकाश दाई बिनाको तिहार कस्तो भयो भनेर । प्रकाश दाइ विनाको पर्व दिदीहरुले भोगी सक्नु भएको छ दिदी । तर प्रकाश दाईको मृत्यु थियो, मेरी दिदी तिम्रो भने साहदात देशका लागि । दुवै परिवारबाट देशकालागि योगदान छ प्रकाश दाई पनि त आफ्नो ज्यान खकुरीको धार मै राखेर युद्ध मोर्चामा लड्नु भएको थियो तर प्रकाश दाईको परीवार आज युद्धको ब्याज उठाई रहेको छ । तर मेरो परीवारले के पायो परीवारको सदस्य गुमायो, शारीरीक अपाङ्ग बनायो परविारका बृद्ध बालाई मानसिक रोगी बनायो दिदी तिम्रो र मेरो वियोगमा अकालमा आमाले ससार छाड्नु भयो । हाम्रो परिवारको तर्फबाट तिम्रो सहादात मात्र हाम्रा नेताहरुका लागि भने थिएन । वाहाँहरुलाई सत्तामा लडिबुडि र डुबुल्की मार्न हुँदा चैँ व्यर्थ ज्यान गयो मेरी दिदिको जस्तो लाग्छ । तिमी युद्ध मोर्चामा लड्दा लड्दै घाईते भएर कतै तिम्रो उपचार नभई तिम्रो ज्यान गयो कि भन्नेमा बाले धेरै चिन्ता गर्नु हुन्छ । यदी त्यस्तो भएको भएपनि हामी संग धन सम्पति त थिएन तर पनि ज्यान बन्दक राखेर पनि बाले उपचार गराउनु हुन्थ्यो । त्यसमा झन ठूलो विस्मत छ तर के गर्नु हाम्रो विस्मत विस्मत मात्रै त भयो, दिदी ऐया बा, आमा, भाइ भन्दा हामी आएनौ नभन्नु है किन की समय त्यस्तै थियो पल्लो गाउँबाट हेरी रहेको थिएँ मनभरी आक्रोस र पिडाबाकेर तिमी छटपटाई रहँदा ।
दिदी चाडबाड आएपछि यो मनले सबै कुरा बिर्सने गरे पनि तिम्रो अभाव खड्किरहन्छ मलाई । दिदी बिगतका १७ वटा तिहार त खालि निधार मै बिते जहिले दिदी भाइको भेट हुन्छ नि त्यही बेला तिज मनाउँला तिहारमा रमाउँला नि ल । दिदी यो तिहार पनि खाली निधार रोएरै बित्ने भयो ।
Previous articleतिहारसंग जोडिएका ऐतिहासिक प्रसङ्ग र जीवनसंग जोडिएको तिहार
Next articleव्यवसाय धान्न बेकरीजन्य उत्पादनको मूल्य बृद्धि
समाचार समाचार माओवादी जनयुद्धमा मारीएकी दिदीको यादमा